चित्त बुझाउनु बाबा-आमा, अब म नेपाल फर्कन्न ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
चित्त बुझाउनु बाबा-आमा, अब म नेपाल फर्कन्न !
दशै आयो, तिहार आयो तर त्यहां मलाई केही पनि आएन । यसपाली त कुरा पनि भएन घरमा अघिल्लो वर्ष बरु भिडियो च्याटमा भेट भएको थियो । मलाई हरेक बर्ष दाईलाई तिहारमा सपिङ्ग गराएको कति याद आउँछ । दाई भन्नुहुन्थ्यो, ‘काली यसपालीको तलबबाट तँलाई लुगा मात्र ।’
लाखौँ नेपालीहरुको सपना अझ खासगरी नेपाली बिद्यार्थिहरुको सपना अमेरिका गएर पढने । मेरो पनि सपना थियो, अमेरिका गएर उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने । भन्दा भन्दै सपना वास्तविकतामा परिणत हुन बेर लागेन । एक बर्षको अन्तराल संगै सेट अनि टोफेलमा राम्रो नतिजा ल्याएपछी अमेरिका हिडेँ म । हुन त आठ बर्ष भो म यहाँ आएको । अहिले कति परिर्वतन भयो होला नेपालमा ।
अमेरिका आउन घरमा त्यति धेरै झगडा गरेको मैले अझै सम्झन्छु । धन्न बाबाले मान्नुभयो र परिवारको सहयोग पाए, नभए त सम्भव नै थिएन । आमा ‘पिलिज !’ भनिदिनु न मलाई इन्टेरियर डिजाइन पढ्ने मन छ, भनिदिनुन बाबालाई भनेर बुझाउन ठुलै प्रयास गरेँ । त्यो दिनको अझै याद छ । वाफ रे ! कति बबाल भएको थियो घरमा । हुन त मलाई पनि थाहा थियो जति किच किच गरपनि अन्तिममा पढाउँछन भनेर । आजकलका सवै विद्यार्थिहरु यही त चाहान्छन । अमेरिका आउने अनि आफुले चाहेको बिषय पढ्ने । मैले पढन चाहेको बिषय त नेपालमै थियो तर पनि म मा यु एस ए आएर पढने भुत उत्तिकै चढेको थियो ।
थाहा थियो, यहाँ आएर दुख पाउछु भन्ने कुरा । उड्ने सपना चाँहि सुखका निम्ति । यहाँ आउँदा बाबाले भन्नुभएको अझै याद छ । त्यहाँ गएर तिमिले आफैँ काम गरेर पढ्नुपर्छ । यो सबै पार लगाएर फर्किने हिम्मत छ ? छ भने जाउ । म तिमिलाई सँधै सहयोग गर्छु । अनायासै मेरो मुखबाट निस्किएको थियो सक्छु, जान्छु । यहाँको आफनो अपार्टमेन्ट अनि आफनो रुममा बसेर म आफनो विगत सम्झदै छु । त्यसरी सक्छु भन्दै म यहाँसम्म आइपुगेकी छु । म अव किन आफनो देश र्फकने ? हिम्मत किन मर्यो मेरो ? आफनो देश फर्केर केही गरुला भन्ने चाहाना नै छैन । लामो समयपछी सोच्दै छु कि कहां रोकिए म ? इन्टेरियर डिजाइनिङ्गंको कोर्ष पनि शुरु भयो । तर अति नै महङगो । घरबाट संधै पैसा पठाएर त यहाँको जीवन धान्न सम्भव नै थिएन । काम त गर्नु थियो मैले । नेपाल जस्तो छैन यहाँ जागीर भन्ने बित्तिकै पाइने ।
तर जागिर शुरु गरेपछि चाँहि सहज भयो । तर यता कामको तनाव, उता पढाइको लागि पैसा जुटाउनु पर्ने । नेपालबाट धेरै पटक पैसा पठाइदिनुभएको थियो । अव पनि आफुले कमाउन नसके लाजलाग्दो हुने नै भयो । कमाउँदै पढ्दा त कामको प्रेसर नै बढी । अझ स्टुडेन्ट भिसामा त एकदमै गाहे छ यहाँ । यही यही प्रेसर भित्र स्टडी कता हरायो ? मलाई नै याद छैन । इन्टेरियर डिजाइनिङ्गको पाँचौ सेमेस्टरको काम अनि पैसाको खाँचो यत्ति बढेको थियो कि कोर्ष बीचमै छुटयो । त्यसपछि एकदमै फ्रस्टेड भएँ म ।
फेरी मैले जागिर पनि परिवर्तन गरेँ । म्यक्डोनलमा भने तलव एकदमै राम्रो थियो । कसरी सपना भुलेँ र पैसा मात्रै थुपार्ने योजना बनाए मेले ? पैसा नै धेरै महत्वपुर्ण हुन थालेछ मलाई । नेपाल र परिवार लाई छोडेर त धेरै अगाडी पुगँे म । पुग्न त पुगँे तर एक्लो दुनियाँमा । शुरु शुरुमा त नेपाली दिदी दाई भेट्दा त नेपाल नै पुगेजस्तो लाग्थ्यो । अनि आफनै दिदी दाइ भेटेजस्तो लाग्थ्यो । अहिले त कामको प्रेसर यत्ति छ कि न नेपालबाट कसैसंग भेट हून्छ न कसैसंग बोल्ने फुर्सद नै हुन्छ । दशै आयो, तिहार आयो तर त्यहां मलाई केही पनि आएन । यसपाली त कुरा पनि भएन घरमा अघिल्लो वर्ष बरु भिडियो च्याटमा भेट भएको थियो । मलाई हरेक बर्ष दाईलाई तिहारमा सपिङ्ग गराएको कति याद आउँछ । दाई भन्नुहुन्थ्यो, ‘काली यसपालीको तलबबाट तँलाई लुगा मात्र ।’
म कति सताउथे दाइलाई । तिहारमा सपिङ गराएको कति याद आउँछ । मेरो दिमागमा ताजै छ, म इमोसनल ब्याल्कमेलिङ्ग गर्थे दाइलाई, नयाँ ब्यागको लागि प्लीज दाई भन्दै । यसपाली तिहारमा दाईसंग कुरा पनि भएन, मरो व्यस्तताका कारण ।
सायद घरबाट एकदमै टाढा पुगेँ । अनि परिवारको मनबाट पनि । फोन त हुन्छ कहिले काँही आमा बाबा संग । च्याट बस्यो कि रोइहाल्ने । बाबा संधै प्रश्न गर्नुहुन्छ, नेपाल कहिले फर्किन्छेस नानी ? अव त मेरो मन पनि रुन्छ बाबा संधै भन्नुहुन्छ, कोर्स पुरा नगरेर के भो ? यहीँ आएर केही गर, पढ । तर अहं म फर्किन सक्दिनँ । इगो हट हुदैन र ? हून्छ नि जे भने पनि हून्छ । मेरो जीद्दीले त मैले नै गरेको हो यहाँ आउने ।
सायद आफनै देशमा भएको भए एउटा राम्रो इन्टेरियर डिजाइनर भएर काम गर्दै हुन्थे होला । तलव जस्तोसुकै होस । अव छोड इन्टरियर डिजाइनिङ्ग । आखिर पैसा नै चाहिएको रहेछ मलाई । म यहांबाट नेपाल फर्किन्न । अमेरिकाको डोरीले यसरी बाँधेको छकी, मसंग यहांबाट फुत्केर जाने कुनै उपाय छैन । सायद अव आमा बाबाले नै चित्त बुझाउनु पर्छ । म नेपाल आउदिनँ ।